Football Khabar » ‘रोनाल्डोको स्थान लिन सक्ने खेलाडी कोही जन्मिएको छैन’
‘रोनाल्डोको स्थान लिन सक्ने खेलाडी कोही जन्मिएको छैन’
स्पेनिस रियल मड्रिडले हालसालै इंग्लिस क्लब चेल्सीबाट स्टार खेलाडी इडेन हाजार्ड भित्र्यायो । सिजन २०१८/१९ मा रियलले ऐतिहासिक खराब सिजन बिताएपछि उसले यो सिजनमा अरू थुप्रै खेलाडी भित्र्याइसकेको छ । अझै भित्र्याउने दौड जारी छ ।
रियलले खास गरी १०० मिलियन पाउन्डमा बेल्जियन स्टार हाजार्डलाई आफ्ना पूर्वखेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोको उत्तराधिकारी खेलाडीका रूपमा अनुबन्ध गरेको छ । २८ वर्षीय हाजार्ड मूलतः मिडफिल्डबाट खेल्ने खेलाडी हुन् । गोल संख्याका हिसाबले हेर्दा उनको रेकर्ड सामान्य मात्रै छ ।
के हाजार्डले रियलमा साँच्चै रोनाल्डोको स्थान लिन्छन् ? रोनाल्डोले हरेक सिजन गर्ने ५० गोल उनले दिन सक्छन् ? यो समयले बताउनेछ ।
तर, स्पेनका अवकासप्राप्त फुटबलर फर्नान्डो मोरिएन्टेसले भने यो कुरा नकारेका छन् । उनले रियलमा रोनाल्डोको स्थान कुनै पनि खेलाडीले लिन नसक्ने बताएका छन् ।
एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै उनले भने, ‘रियल मड्रिडमा रोनाल्डोको स्थान कसैले लिन सक्दैन, उनीजस्तो कोही पनि छैन ।’
फर्नान्डिनोले यदि कसैले रोनाल्डोको स्थान लिन सक्छ भन्छ भने त्यो केवल जोक्स मात्रै हुने बताए । ‘यदि कसैले रोनाल्डोको काम रियलमा कसैले गर्छ भनिन्छ भने त्यो केवल जोक्स मात्रै हुनेछ,’ उनले भने ।
फर्नान्डिनोले रियलले हालै भित्र्याएका खेलाडी हाजार्ड विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीमध्येका एक भए पनि उनले रोनाल्डोको काम गर्न नसक्ने बताए । ‘हाजार्ड विश्वका उत्कृष्टमध्येका एक खेलाडी हुन् । तर, उनले रोनाल्डोको काम गर्न सक्दैनन्, यो समयले साबित गर्नेछ ।’
फर्नान्डिनोले रोनाल्डो रियलका लागि गोल मेसिन खेलाडी रहेको बताउँदै उनीजस्ता खेलाडी रियलले एक युगमा एकपटक पाउने बताए । ‘जसले एक सिजनमा ५० भन्दा बढी गोल गर्थे, यस्ता खेलाडी रियलले एक समयमा एकपटक मात्रै पाउँछ,’ उनले थपे ।
सन् २००९ मा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेडबाट रियल आएका रोनाल्डोले ९ वर्ष स्पेनमा रहँदा ४३८ खेलबाट कूल ४५० गोल गरे । उनी रियलको इतिहासकै सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी हुन् ।
प्रकाशित मिति ७ असार २०७६, शनिबार १५:३०